'विदुरलाई उदाहरणीय नगर बनाउनेछौं' प्रभा बोगटी || अन्तवार्ता
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार, विदुर नगरपालिका
नुवाकोट विदुर नगरपालिका वडा नं. ७स्थित तुप्चेकी स्थायी वासिन्दा प्रभा बोगटी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सोही नगरपालिकाको उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण सानैदेखि राजनीतिमा आवद्ध हुनुभएकी उहाँ माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेतामध्ये एक पोष्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’ की छोरी हुनुहुन्छ ।
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएकी उहाँले जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन सरकार पक्षको धरपकडका कारण घरमा बस्ने र पढ्ने वातावरण नभएपछि युद्धमा होमिनुभएको थियो । जनमुक्ति सेनामा क्रियाशील रहँदा चर्चित खारा आक्रमणदेखि पश्चिम नेपालका धेरै फौजी मोर्चाहरुमा सहभागी भएको अनुभव छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनमुक्ति सेनाको व्यारेकमा बस्नुका साथै पछि स्वैच्छिक अवकाश लिई पत्रकारितातिर लाग्नुभयो। विभिन्न पत्रपत्रिकामा काम गर्नुका साथै समाचार लेखन तथा हिमालय टेलिभिजनमा लामो समय समाचार वाचिकाको रुपमा काम गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रेस सेन्टरको केन्द्रीयसचिवसमेत भइसक्नुभएकी उहाँ हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिदुर नगर कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा गठबन्धनको तर्फबाट विदुर नगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बन्नुभएकी माओवादी नेतृ बोगटीसँग यहाँ निर्वाचन केन्द्रीत कुराकानी गरिएको छ–
विदुर नगरपालिका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पनि हो । यहाँ रसुवा, धादिङदेखि आम नागरिक स्वास्थ्य उपचार तथा सर–सामान किन्नका लागि आउने गर्दछन् । त्यस्तै यस नगरपालिकाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व पनि छ ।
नेपाल एकीकरणका बेला पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं आक्रमण गर्नुपूर्व यहाँ बसेर विभिन्न योजनाहरु बनाएका थिए । ती स्थानहरुलाई संरक्षित गरिएको छ । जस्तो नुवाकोट दरबार, पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको स्थान देवीघाटमा उहाँको सालिक बनाइएको छ । विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु छन् ।
तपाईंका जितका आधारहरु के–के हुन्?
विदुर नगरपालिकामा एमालेले नेतृत्व गरिरहँदा जनताले नयाँ सोच, विकासको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । जनताकाआवश्यकता र मागहरुको सम्बोधन नहुँदा एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकारप्रति मतदाताहरु रुष्ट बनेका छन् । त्यसको विपरित हामीसँग भएको नयाँ सोच र भिजनप्रति स्थानीय आकर्षित भएका छन् । त्यस्तै, राजनीतिक रुपमा अहिले हामीले प्रतिगमनविरोधी गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचनमा होमिएका छौं । एमाले नेतृत्वले गरेको गलत कामको जनताले पनि मूल्यांकन गरेका छन् । पटक–पटक संविधानमाथिको प्रहारलगायत एमालेले एकपछि अर्काे गलत कार्य गर्दै आएको जनताले बुझ्नु भएको छ ।
प्रस्तुति: पुष्पा महरा
महिला दिदीबहिनीहरु लाई आत्मानिर्भर बनाउन चाहन्छु- बरिष्ट सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित